Ciidanka DANAB oo Al-Shabaab kala wareegay Deg. Kuntuwaarey – HalQaran.com
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Ciidamo ka tirsan kuwa DANAB ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay howlgallo ay ka fuliyeen deegaanno ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegey inay la wareegeen degmada Kuntuwaareey ee Gobolkaas oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab.
Waxay kaloo sheegeen saraakiisha, in Ciidamada ay gacanta ku dhigeen Saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kale ay Saldhiga degmada Kuntuwareey ka siidaayeen dad Shacab ah oo u xirnaa Al-Shabaab.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamada ay weli howlgallo ka wadaan Xaafadaha kala duwan ee degmada Kuntuwaareey.
Tags: Al Shabaab, Ciidanka Danab, Kuntuwaarey, la wareegid
DF Somaliya oo Digniin culus ka soo saartay Fatahaadda Wabiga Shabeelle